China Super warshad ka dib Photoluminescent Pigment warshad iyo soosaarayaal | Grand Luminous
Iftiimin dheer kadib iftiinka Photoluminescent Pigment
Midabka Photoluminescent: Midabkayaga muddada-dheer luminescent waa Strontium alumateum ku saleysan foshor, kaasoo iftiin u soo diri kara nuqul iyadoo la nuugo karo iftiin kala duwan oo dib loo isticmaali karo. Sheygu kuma jiraan wax walxaha shucaac ah, waxaana loo isticmaali karaa sidii waxyaabo lagu daro si ay si siman ugu kala firdhiyaan wakiilada hufan, sida jaakadaha, kiishashka, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiilooyinka, si loo dardar geliyo shaqada ka-tagidda wakiilladaas. U isticmaal midabkeeda dabiiciga meelaha dhalaalaya waxaadna soo saartaa midabyo kala duwan oo iftiin ah t ...
Midabkayaga muddada dheer waxaa loo yaqaan 'strontium aluminate phosphor based', oo iftiin u noqon kara iftiinka iyadoo la nuugo iftiin kala duwan oo la arki karo dibna loo isticmaali karo. Sheygu kuma jiraan wax walxaha shucaac ah, waxaana loo isticmaali karaa sidii waxyaabo lagu daro si ay si siman ugu kala firdhiyaan wakiilada hufan, sida jaakadaha, kiishashka, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiilooyinka, si loo dardar geliyo shaqada ka-tagidda wakiilladaas. U isticmaal midabkeeda dabiiciga meelaha dhalaalaya oo u gudbi midabo kala duwan oo iftiin mugdi ah. Waxaa loo isticmaali karaa iftiinka degdega ah, calaamadaynta calaamadaynta iyo qurxinta.
Foomka kiimikada: SrMgAl4O8: Eu2 + Dy3 +
1. Midabka sawirka-luminescent-ka wuxuu leeyahay astaamaha iftiinka sare iyo muddada. (Tusaale ahaan: DIN67510 wuxuu dhalaali karaa 10000 daqiiqo).
2. Waxay u adkaysan kartaa nalka iyada oo aan da 'weyni iyo xasillooni kiimikaad (waxa loo adeegsan karaa in ka badan toban sano)
3. Waa sun-la'aan iyo cirbad-la’aan; waana wax aan geysan karayn oo aan qarxin. Markaa waa nooc cusub oo alaabada iftiinka leh oo leh ilaalinta deegaanka.
4. Midabka sawirka-luminescent-ka waa fududahay in la isticmaalo oo si ballaaran loo isticmaali karo.
5. Midab badan oo dhalaalaya: buluug-cagaaran, buluug-cagaaran, cirka-buluug, buluug, iyo waliba jaale, casaan iyo caddaan iwm.
6. Marka la barbardhigo midab-dhaqameedka sawirka-luminescent-ka, anaga oo adeegsanayna shaxda (miiska), waxaan arki karnaa in ifaafka midabaynta shirkadda ee laga sameeyay dhulka dhifka ah ay aad uga weyn tahay budada budada ah ee sulfide luminescent.
Faahfaahinta Photoluminescent Pigment
Midab dhalaalaya Taxanaha alaabada Lambarka Qaamuuska Luminance （mcd / m2） Waqti dambe kadib Min Cabbirka qaddarka （um D50） Dhexroor walxaha ugu badan
1min 10min 60min Dmax （um） <
Jaale / cagaar RBG-20 ' RBG-201 2500 400 62 7500 75〜85 120
RBG-202 1900 年 290 45 5500 35〜45 80
RBG-203 1500 240 26 4500 10〜20 40
RBG-40 ' RBG-401 2800 430 80 8000 75〜85 120
RBG-402 2300 350 60 6500 35〜45 80
RBG-403 1800 280 38 5000 10〜20 40
RBG-60 ' RBG-601 4000 620 110 12000 75〜85 120
RBG-602 3500 550 85 10000 35〜45 80
RBG-603 1900 290 45 5500 10〜20 40
Buluug-cagaaran RBB-30 ' RBB-301 1700 420 75 10000 75〜85 120
RBB-302 1300 260 55 7000 35〜45 80
RBB-303 850 190 35 5000 10〜20 40
Sky-buluug RBT-20 ' RBT-201 800 100 20 18520 75〜85 120
RBT-202 700 80 10 12000 35〜45 80
RBT-203 550 60 5 8000 10〜20 40
1. Xogta kor ku xusan ee farsamada waxaa lagu helay iyadoo la raacayo imtixaanka iyadoo la raacayo habka 'DIN67510' Qaybta I;
2. Waqtiga iftiinka kadib waxaa loola jeedaa waqtiga ay qaaddo nalku si uu u yaraado 0.32mcd / m2 waqtiga
3. Qiimaynta saxda ah ee midabka luminta, fadlan tixraac tusaalooyinka.
Hore: Koofiyadaha Luminescent Koofiyadaha iftiinka leh xargaha luul leh,
Xiga: Luminescent Jade ee ku saabsan gunta toosan iyo shaqooyinka farshaxanka
Shayga No :: budada iftiinka leh ee loo yaqaan 'Photoluminescent pigment' iftiinka iyo muddada ka badan toban sano nolosha Nolo-sun iyo Waxyeello la'aan
sky-buluug iwm. avaiableAluminate lugaha luminescent po
Jaale-cagaar Photoluminescent Pigment
Strontium (Sr) Aluminium Photoluminescent Pigment
Biyo-La'aanta Biyaha ee Powder Madow ee loogu talagalay iftiinka ...
Muddo dheer kadib iftiinka Photoluminescent Pigment
biyo-diidmada biyaha ee Photoluminescent-ka biyuhu
Powoluminescent Powder loogu talagalay Biyaha Wanaagsan ee Ku Saleysan Biyaha ee ...